October | 2020 | HimiloNetwork
Himilo October 25, 2020	Leave a comment 294 Views
MUQDISHO (HN) — Si loo xoojiyo is-dhexgalka iyo wada-noolaanshaha bulshada, gobalka Catalonia ee dalka Spain ayaa go’aansaday in dugsiga dadweynaha lagu bixiyo maaddo ku saabsan diinta Islaamka. Qorshahan oo soo jiitamayay muddo badan, wuxuu farayaa iskuullada dowladda in sannad-dugsiyeedka 2020-21 ardayda Muslimiinta ah iskuullada loogu dhigo barashada diinta Islaamka. Qorshahan wuxuu sidoo kale xoojin doonaa isdhexgalka iyo midnimada. Wuxuuna sidoo kale ...
Himilo October 25, 2020	Leave a comment 261 Views
LONDON (HN) — Dhaqaalaha iyo maaliyadda ku dhisan nidaamka Islaamiga ah, wuxuu qarnigan 21aad dunida ka noqonayaa doorashada iyo xulka koowaad. Waxaa bangiyada Islaamka ahi ku jiraan kuwo loogu doonis badan yahay adeegsigooda adduunka oo dhan. Maanta waxay bangiyada qaabka Islaamiga ah ku shaqeeya ay ku fadhiyaan adduun dhan $2 trillion waxaana la filayaa inay gaarto $3.8 trillion sannadka 2023-ka. Aqoonsashada ...
Himilo October 25, 2020	Leave a comment 184 Views
MUQDISHO (HN) — Helidda agabyada caafimaad ee looga hortagayo xanuunka Corona wuxuu ku adag yahay in badan oo bulshada Maraykanka kamid ah. Darbi-jiifta ku nool magaalooyinka waaweyn ee USA waa kuwa ugu daran. Si kastaba, Muslimiinta Maraykanka ayaa isaga imaanaya inay gargaar isugu jira qeybinta gafuur-xirada kahor-tagga u ah faafidda xanuunka siiyaan darbi-jiifta iyo danyarta. Ku dhawaad 100,000 oo gafuurxir ...
Himilo October 25, 2020	Leave a comment 235 Views
MUQDISHO (HN) — Sannadihii ina dhaafay, jilayaal caan ah ayaa kusoo biirayay Islaamka oo ah diinta maanta ugu badan caalamka iyo tan loogu doonis badan yahay kamid noqoshadeeda. Sana Khan oo ah jilaa aflaamta Hindiya sameysa ayaa ugu danbeyntii kamid noqotay qoyska Islaamka. Waxayna sheegtay inay iskaga baxday fanka filimada, waxayna tiri; “Waxaan isku taagay inaan u adeego insaaniyadda iyo inaan ...
Musiibadii 14-ka Oktobar – Wixii dhacay waa laga soo kabanayaa!